Mudane ka tirsan baarlamaanka Puntland oo maamulka Soomaaliland ku eedeeyey in uu colaadeed ka hurinayo gobolka Cayn. – Radio Daljir
Mudane ka tirsan baarlamaanka Puntland oo maamulka Soomaaliland ku eedeeyey in uu colaadeed ka hurinayo gobolka Cayn.
Garowe, July 13 – Xildhibaan Faarax Sulub Jaamac oo ka mid ah baarlamaanka dawladda Puntland ayaa maanta ka xog-warramay socdaal isaga iyo xubno kala oo ka tirsan dawladda Puntland ay ku tageen deegaanno badan oo ka mid ah gobolka Cayn safarkaasi oo muddo bilo ah qaatay.
Xildhibaanka oo maanta shir jaraa’id qabtay xarunta barlamaanka Puntland ee Garoowe ayaa si mugleh uga warramay xaaladda nabad-galyo deegaannada ay socdaalka kusoo mareen ee gobolka Cayn, isaga iyo xubno kale oo ka mid ah dawladda kuwaasi oo uu hor-kacayey wasiir ku xigeenka waxbarashada ayna ka mid ahaayeen saraakil xagga amniga ah iyo mudanayaal kale oo baarlamaan, isagoo cambaareeyey fara-galin uu sheegay maamulka Soomaaliland in ay halkaasi ka wadaan.
Mudanuhu, waxaa uu si kulul hadalkiisa maanta uu ugu weeraray maamulka Soomaaliland oo uu sheegay in ay deegaankaasi gobolka Cayn ay ka wadaan colaad-hurin xooggan oo ay ku damacsan yihiin qas iyo qalaase nabad-galyo-xumom oo ka dillaaca deegaanka haatan xasiloon.
Xildhibaanku, waxaa uu sheegay maamulka m/weyne Siilaanyo in uu wado qorshe lagu dhibaataynayo dadka deegaannadaasi ku sugan taasoo uu sheegay in ay bilaabatay markii uu xilka qabtay, xasuuqna uu u gaystay dad maato ah oo aan waxaba galabsan, uuna mudan yahay in la horgeeyo maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka.
Ugu dambayntii Xildhibaan Faarax Sulub, ayaa sheegay muddadii gobalkaasi Cayn ay ku sugnaayeen in ay u guur-galayeen xaaladda dhabta ah ee ka taagan deegaano badan oo ka mid ah Gobalka Cayn, xog aruurin baaxad lehna ay soo sameeyeen ayna jiraaba dhibaatooyin aan la dhalyalsan karin oo xagga nolosha iyo caafimaadka ah oo ka jira meelo badan oo gobolka Cayn ah.
Cabdiweli Maxmed Shiikh,